एकादेशको १० अर्बको कथा, कठै मेरो देशको व्यथा ! (फोटो फिचर) « Khabarhub
एकादेशको १० अर्बको कथा, कठै मेरो देशको व्यथा ! (फोटो फिचर)
राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ । केहिदिनदेखि काठमाडौंका विभिन्न ठाउँसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरलगायतका क्षेत्रमा गरिएको प्रदर्शनमा सरकारले बल प्रयोग पनि गरेको छ ।
आज पनि काठमाडौंको बसन्तपुरमा युवाहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले गरेको खर्चको विवरण माग गर्दै व्यंगात्मक शैलीका प्लेकाडसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गरेको १० अर्ब रुपैयाँको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै लेखिएको प्लेकाडमा ‘एकादेशको १० अर्बको कथा, कठै मेरो देशको व्यथा !’ लेखिएको छ ।
युवाको सरकार विरोधी प्रदर्शन कस्तो रह्यो ? सरकारलाई खबरदारी गर्न बनाइएका प्लेकाडमा के के लेखिएका थिए ।
तस्वीरमा हेर्नुहोस् प्रदर्शन
प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०७७, शुक्रबार ८ : ०२ बजे